China CNC Horizontal Machining Center orinasa sy mpanamboatra | Oturn
H serivisy fanodinana marindrano H dia mandrindra ny firafitry ny fandriana ankapobeny miendrika T, miendrika tsanganana, firafitry ny boaty mihantona, henjana mafy.
Endri-javatra amin'ny milina
Ny ivon-toeran'ny milina marindrano H dia mandrindra ny firafitry ny fandriana miendrika T amboara manara-penitra, andry gantry, firafitry ny boaty mihantona, henjana mafy, fihazonana marina tsara, mety amin'ny lalimoara marina.
Ho an'ny fanodinana ny singa, ny fikosoham-bika amin'ny tarehy, ny fandavahana, ny famerenana, ny mankaleo, ny fikitihana sns dia azo tanterahina amin'ny clamping iray indray mandeha, ny milina dia be mpampiasa amin'ny fiara, transit transit, aerospace, valves, milina fitrandrahana, milina lamba , milina plastika, sambo, herinaratra elektrika ary saha hafa ..
Haben'ny workbench (halavany × sakan'ny)
Fanondroana ny workbench
Loza misy kofehy 24 × M16
Enta-mavesatra farany ambony amin'ny latabatra fiasana
Ny savaivony mihodina indrindra amin'ny latabatra fiasana
Afindrao ny latabatra havia sy havanana
Mihetsika ambony sy midina ny headstock
Mandroso sy mihemotra ny tsanganana
Ny halaviran'ny tsipika afovoan'ny spindle mankany amin'ny latabatra
Ny halavirana avy amin'ny faran'ny spindle mankany afovoan'ny latabatra fiasana
Isan'ny lavaka fikosoham-bary
Torela famoahana spindle
Fitaovana sy maodely mpitazona fitaovana
Hafainganana haingana (X, Y, Z)
Ny tahan'ny famahanana (X, Y, Z)
Fahano ny herin'ny motera (X, Y, Z, B)
Torque famoahana motera
Fahaizan'ny magazine magazine
Fomba fanovana fitaovana
Max. Haben'ny fitaovana
Mifanila tsy misy fitaovana
Fotoana fanovana fitaovana
Fanerena ny rafitra hydraulic
Fahafahana tanky solika
Mikoriana / loha ny paompy mihena
Fenitra: 20L / min, 13m
Fahaiza-manao herinaratra tanteraka
Ny masinina dia mifototra amin'ny fototra, tsanganana, lasely mihetsiketsika, latabatra fanondroana, latabatra fifanakalozana, fihenam-bidy, fanosorana, rafitra hydraulic, fonosana feno fiarovana sy rafitra fanaraha-maso isa. Ny magazine magazine dia azo ampiasana karazana disc na rojo.
Mba hanatsarana ny fampisehoana fanoherana ny hovitrovitra, ny farafaran'ny milina marindrano dia atolotra hampiasa ny endriny miolakolaka miolaka T miaraka amin'ny fanoherana hovitrovitra tsara indrindra eto an-tany, miaraka amina rafitra mihidy mifono boaty, ary ny fandriana aloha sy aoriana dia mitambatra. Ny farafara dia manana fiaramanidina fanovozan-kevitra ho an'ny fametahana torolàlana roa ho an'ny fivezivezan'ny latabatra fiasana sy ny tsanganana. Raha jerena ny fanamorana ny fanesorana ny puce sy ny fanangonana coolant dia kasaina hapetraka ny flute puce amin'ny lafiny roa amin'ny fandriana.
Ny tsanganana mitsivalana an'ny masinina marindrano dia kasaina hitrandrahana vatan-kazo mihidy symmetrika mihidy, miaraka amin'ny taolan-tehezana lava sy lava miverimberina voarindra ao anaty lavaka. Amin'ny lafiny roa amin'ny tsanganana dia misy sehatra iraisana ho an'ny fametrahana ny torolàlana mihodina ho an'ny fivezivezin'ny vatan-doha (ny fipetrahan'ny torolàlana momba ny fitarihana torolàlana). Ao amin'ny làlana mitsivalana (làlana Y) an'ny tsanganana, ankoatry ny lalamby mpitari-tolona ho an'ny fivezivezena, dia eo koa ny visy baolina sy ny seza fampifandraisana môtô eo anelanelan'ny lalamby mpitari-dalana roa izay mitondra ny lohan-doha hifindra sy hidina. Ny ampinga vy tsy misy hafainganam-pandeha haingam-pandeha dia heverina amin'ny lafiny roa amin'ny tsanganana. Voaaro sy azo antoka ny fiarovana ny lalamby sy ny visy fitarihana.
Ny latabatra fiasana dia miorina tsara sy mihidy amin'ny servo, ary ny farafahakeliny farafahakeliny dia 0,001 °
Teo aloha: Masinina hobbing CNC Gear
Manaraka: Lathe tokana mitsivalana tsanganana mitsangana